iOS को लागि gmail एक प्रमुख अद्यावधिक हुन्छ तर प्रयोगकर्ता खुसी छैनन् - समाचार नियम
iOS को लागि gmail एक प्रमुख अद्यावधिक हुन्छ तर प्रयोगकर्ता खुसी छैनन्
इंटरनेट को विशालकाय गुगल बल्ल इमेल क्लाइन्ट पृष्ठभूमि ताजा दिन्छ iOS को लागि आफ्नो Gmail अनुप्रयोग लागि एक प्रमुख अद्यावधिक जारी गरेको छ, तर यसको प्रयोगकर्ताहरू यसको बारेमा खुसी छन्.
गुगल बुधबार अद्यावधिक घोषणा, को iPhone लागि जीमेल र iPad पृष्ठभूमि ताजा सुविधा दावा भनेर प्रकट, जो इमेल हुनेछ अर्थ “पूर्व-ल्याइयो” र तपाईँले अनुप्रयोग खोल्न जब हेर्न तयार.
गुगल सफ्टवेयर इन्जिनियर मेलिसा Dominguez हिजो एउटा ब्लग पोस्ट मा भने, “तपाईं आफ्नो इमेल पहिलो कुरा जाँच गरिरहनु बिहान वा रूपमा तपाईं किराना पसल मा लाइन मा पर्खिरहनु कि छैन, तपाईंले चाँडै सकेसम्म आफ्नो सन्देशहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ. जीमेल iOS अनुप्रयोग गर्न आजको अद्यावधिक संग, यो सिर्फ त्यसो गर्न सजिलो छ।”
यो नयाँ सुविधा आइओएस आवश्यक 7, र प्रयोगकर्ता पनि गर्न आवश्यक हुनेछ “पृष्ठभूमि अनुप्रयोग ताजा” मा सरेका. तथापि, केही चिन्ता गर्न नचाहेको, अद्यावधिक अनुप्रयोग को प्रयोगकर्ता द्रुत भएको रूपमा अनुप्रयोग स्टोर यो भन्दा बढी bemoan गर्न, केही यसलाई आफ्नो चोट छ भन्दै संग ब्याट्री जीवन.
एक दु: खी जीमेल प्रयोगकर्ता भने, “यो अद्यावधिक पृष्ठभूमि अनुप्रयोग ताजा समावेश र यो धेरै छिटो मेरो ब्याट्री जीवन हत्या. अनुप्रयोगलाई बाँकी अझै पनि राम्रो छ, तर म मेरो ब्याट्री खातिर पृष्ठभूमिमा ताजा बन्द थियो।”
iOS अपडेट लागि जीमेल पनि यसलाई धेरै जीमेल iOS अनुप्रयोगहरू र सेवाहरू साइन इन लागि समर्थन ल्याउँछ.
“Gmail अनुप्रयोग पनि अब साइन इन गुगल iOS अनुप्रयोगहरू मार्फत समर्थन, लगायत नक्सा, ड्राइभ, Youtube र Chrome,” गुगल बताए. “एक साइन इन, र तपाईं सबै साइन इन (यो पनि काम गर्दछ बाहिर हस्ताक्षर लागि). त्यसैले तपाईं 27 अक्षरको पासवर्ड टाइप वा आफ्नो 2-चरण प्रमाणिकरण कोड हरेक समय तपाईं अर्को Google अनुप्रयोग नेभिगेट प्राप्त गर्न हुनेछैन।”
तथापि, प्रयोगकर्ता या त यस बारेमा पनि खुसी छैनन्, र केही सुविधा काम गरिरहेको छैन भनेर दावी.
“म अनुप्रयोग अद्यावधिक गर्नुभएको देखि अब यो मलाई लग इन गर्नुपर्छ र यसलाई धेरै अद्यावधिक अघि भन्दा ढिलो छ,” एक नाराज प्रयोगकर्ता लेखे.
यो लेख, iOS को लागि gmail एक प्रमुख अद्यावधिक हुन्छ तर प्रयोगकर्ता खुसी छैनन्, बाट सिन्डिकेट छ यो इन्क्वायरर र अनुमति यहाँ पोस्ट.
20920	0 App स्टोर, जीमेल, गुगल, प्रश्न, IOS र, iPad, iPhone, YouTube
← 10 हृदय रोगहरु लागि प्रभावकारी प्राकृतिक उपचार 'परिवर्तन छैन’ कर्नेलससुमाकर अवस्थामा →